२९ औं प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर सिफारिस !
न्यायिक इतिहासमा २७ वर्षपछि बल्ल पूर्णकालीन ‘प्रन्या’ बन्ने सम्भावना !
| 2018-12-13 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको इतिहासमा २७ वर्षपछि पूर्णकालीन प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन् ।
तेस्रो बरियातामा रहेका चोलेन्द्रलाई संवैधानिक परिषद्को बिहीबार बिहान बसेको बैठकले ‘प्रन्या’का लागि सिफारिस गरेको हो । उनी सर्वोच्च अदालतको २९ औं ‘प्रन्या’ बन्दै छन् ।
न्यायिक इतिहासमा चोलेन्द्र यस्तो बिन्दुमा छन्, लोकतान्त्रिकगणतन्त्र नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन पछि सर्वाेच्च अदालतले पहिलो पूर्णकार्यकाल (४ बर्से) को ‘प्रन्या’ पाउने भएको हो ।
सरकार बहुमत प्राप्त र स्थायी प्रकृतिको भएजस्तै, सर्वाेच्च अदालतले २७ वर्षपछि ४ वर्षीय कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उनलाई पाउने भएको हो ।
यस अघि २०४८ सालमा तत्कालीन ‘प्रन्या’ विश्वनाथ उपाध्याय मात्रै यस्ता भाग्यमानी बने, जसले ४ वर्ष अर्थात् पूर्णकार्यकाल सेवामा रहन पाएका थिए ।
०१४ मंसिर २८ गते जन्मिएका जबराले सर्वोच्च अदालतमा ०७१ जेठ १३ देखि न्यायाधीशका रुपमा सेवा गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को उक्त बैठकमा वर्तमान प्रन्या ओमप्रकाश मिश्र, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङफे उपस्थित थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि बार्गेनिङ गरेकाले यस अघिका वैठकबाटै सिफारिस हुनु पर्ने प्रन्या केही दिन ढिला सिफारिस भएको हो ।
उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र आउने पुस १७ गते अवकाश पाउँदैछन् ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको अघिल्ला वैठकले प्रधानन्यायाधीशमा दीपराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा चोलेन्द्र उभिएका थिए।
संविधानको धारा १२९ उपधारा २ मा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने’ व्यवस्था छ ।
उक्त धाराको उपधारा–३ मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने’ उल्लेख छ ।